WayDroid: Anbox ine makwikwi, uye inogona kuipfuura, | Linux Vakapindwa muropa
Anenge mavhiki maviri kana matatu apfuura ini ndaida kuyedza Anbox pane yangu Raspberry Pi ine Manjaro ARM. Ndichiri kuyedza pabhodhi diki, ini ndakaedzawo palaptop yangu naManjaro, asi hapana chandakanga ndashandira ini (handina kutambisa nguva kuyedza kutsvaga chero chinhu). Izvo zviripo zveRaspberry zvinoshanda, muchidimbu nekuti iri bhodhi rakashomeka uye mamwe maApplication eApple anoita zvine musoro ipapo. Uye zvakanaka, chiitiko chacho hachisi icho chakanyanya kunaka chingave chakave. Nechikonzero ichocho, uye kunyangwe ndichigona kurarama ndisina icho, zvakandibata leer about Waydroid.
Kusvika ikozvino, mafoni mazhinji uye mapiritsi anovimbisa rutsigiro rwekumhanyisa Android application anoshandisa Bhokisi. WayDroid iri kutora matanho ayo ekutanga, uye zvakakosha kuti utaure kunobva zita iri: "Wayland" uye "Android". Izvozvi, uye sei Anbox iri chaizvo yakavakirwa pairiZvakafanana nekuburitsa Android pafoni, asi haitambure zvakanyanya semuchina chaiwo weVirtualBox kana GNOME Mabhokisi, pakati pevamwe, nekuti inoshandisa iyo imwechete kernel seyakagashira system.
WayDroid inoshandisa LineageOS
Soooo heino iyo nyowani Anbox inomhanya izere kumhanya pane iyo #OnePlus 6 ine Linux 5.14 pa @postmarketOS, chikuru kuvonga @Khode_Erfan yekuita izvi kuti zviitike! pic.twitter.com/QGRA1KUpEf
- caleb 🐧📱 🏳️‍🌈 (@calebccff) July 24, 2021
Zvatinogona kuona muvhidhiyo iri pamusoro ndeye OnePlus 6 neLinux 5.14 uye postmarketOS inomhanya WayDroid, kunyangwe Caleb achitaura nezve Anbox inova software iyo yakavakirwa pairi. Chinhu chakanaka ndechekuti zvinoita sekunge mashandiro acho anopfuura aya e "Android Bhokisi", asi chakashata ichocho inoshanda chete pamakomputa uchishandisa iyo Wayland server. Panguva ino, inozivikanwa kuti inowirirana nemidziyo yese inogona kumhanya Ubuntu Kubata.
Chinhu chakanaka nezve izvi kuona kuti kuvandudzwa kweAnbox, WayDroid kana chero chii chinoita kuti zviite mhanya Android maapplication pane linux ramba uchienda. Ehezve, zvingave zvakanaka kugona kuzviita senge Windows 11 kuda, asi isu tichazofanira kumirira kwenguva yakati rebei kusvikira vatangisa chimwe chinhu chinoshanda pamakomputa mazhinji uye vanogona kumisikidza chero mushandisi pasina kuomerwa. Anbox inozviita, asi kwete chero munhu anogona kuiisa uye nekuita uko kunogona kuvandudzwa. Zvisinei, Patience.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WayDroid: Anbox ine makwikwi, kunyangwe ichingova chikamu, uye inogona kuipfuura
Linus Torvalds inowana marii?